Miatrika sazy am-ponja noho ny sary “vatana miabo” ilay mpikatroka pro-feminisita any Rosia · Global Voices teny Malagasy
Mety hitarika sazy am-ponja 6 taona ny tetikasa ara-kanto vatana miabo
Voadika ny 20 Avrily 2021 5:11 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Français, русский, Español, Ελληνικά, Nederlands, English
“Tsy pôrnôgrafia ny vatako!” hoy ny vakin'ny sora-baventin'ny mpanao fihetsiketsehana. “Andininy 242 ve ity?” hoy ilay polisy manontany tena. Andininy faha-242 amin'ny fehezan-dalàna momba ny heloka bevava any Rosia manameloka ny famoronana sy ny fifanakalozana sary vetaveta. Sary (c): Yulia Tsvetkova. Nahazoana alàlana.
Miatrika enin-taona an-tranomaizina i Yulia Tsvetkova, mpanakanto feminista, talen'ny teatra ary mpikatroka LGBT noho ny fiampangana azy ho nizara sary vetaveta tamin'ny fizarana ny sariny tao amin'ny media sosialy izay nantsoin'ny mpanohana hoe “vatana miabo”.
Tamin'ny 12 aprily, nanomboka ny fitsarana farany tamin'ny raharaha Tsvetkova ny fitsarana iray any Kosmomolsk-on-Amur, any amin'ny faritra farany Atsinanana Khabarovsk any Rosia. Tsy azo natrehina ny fitsaràna, voalaza fa noho ny fampisehoana ilay sary vetaveta.
Voarohirohy ho “namorona sy nizara sary vetaveta” i Tsvetkova, mpanakanto sady talen'ny teatra, 27 taona (Andininy faha-242 (3b) amin'ny Fehezan-dalàna momba ny Heloka bevava any Rosia) noho ny fandefasana sary maromaro misy vehivavy sy fivaviana mitanjaka tao amin'ny pejiny VKontakte. Ampahany amin'ny tetikasany ara-kanto momba ny vatana tsara ilay sary, “Tsy saribakoly ny vehivavy.” Ireo fiampangana araka ny Andininy 242 dia mety hiafara amin'ny sazy an-tranomaizina hatramin'ny enin-taona.
Nilaza tamin'ny AFP ny renin'i Tsvetkova, Anna Khodyreva fa tsy navela hanatrika ny fotoam-pitsarana mihidy izy ary niantso ny raharaha ho “tsy mitombina”. Nilaza izy fa natao ny zavatra rehetra “mba hahazoana antoka fa manana fampahalalana kely indrindra araka izay tratra isika.”
Nitsikera ny fanapahan-kevitra momba ny fotoam-pitsarana tsy azo atrehina i Natalia Zvyagina, talen'ny Amnesty International ao Rosia ary nilaza fa “tokony hiantoka fotoam-pitsarana azo atrehin'ny daholobe” amin'ny raharaha Tsvetkova ny manampahefana Rosiana. Miaraka amin'ny ivon-toeran'ny Fahatsiarovana momba ny zon'olombelona, nanondro an'i Tsvetkova ho voafonja noho ny fieritreretana ​​ny Amnesty ary niantso an'i Rosia mba hanala ny fiampangana rehetra sy “hampitsahatra ny fanaovana ho lasibatra ny vehivavy, LGBTI ary ireo mpikatroka hafa”
Efa nanatontosa tetikasa fanabeazana marobe tany Khabarovsk, ary koa teatra ho an'ny tanora, vondrona an-tserasera momba ny vehivavy sy ny fanabeazana ara-pananahana ho an'ny tanora, ary koa ny vondrona Vagina Monologues izay nankalaza ny fahefana sy ny isafatsiroan'ny vatan'ny vehivavy i Yulia Tsvetkova.
Yulia Tsvetkova ivelan'ny tranon'ny fitsarana. Sary (c): Yulia Tsvetkova.
Efa nogadraina izy tamin'ny Novambra 2019 tany am-boalohany ary notanana tsy hivoaka an-trano hatramin'ny 16 marsa 2020. Tamin'ny Desambra 2019, dia hita fa meloka noho ny fanitsakitsahana ny lalàna rosiana mandràra ny “fampielezana resaka firaisana ara-nofo tsy nentin-drazana eo amin'ireo zaza tsy ampy taona” izy. Nosaziana nandoa onitra 50.000 robla (780 dolara) izy, ary tamin'ny volana jolay 2020 dia voasazy handoa onitra 75000 robla (1.050 dolara) hafa noho ny fandefasana sary mampiseho mpivady mitovy taovam-pananahana miaraka amin'ny ankizy sy ny soratra hoe “Ny fianakaviana no misy ny fitiavana. Tohano ny fianakaviana LGBT + . “
Nilaza tamin'ny AFP izy tamin'ny herintaona fa mino izy fa nampiasain'ny manam-pahefana ny fiampangana sary vetaveta ho hirika iray hamoretana ny fikatrohany LGBT, satria mora ny manasazy ny olom-pirenena ary mitondra sazy maharitra.
Tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny oDR, sehatra OpenDemocracy misahana an'i Rosia sy ny sehatra post-Sovietika tamin'ny taona 2020, i Tsvetkova niresaka momba ny fiantraikan'ny tsy fahazoany mivoaka ny tranony sy niresaka momba ny fandrahonana natrehiny avy amin'ireo mpikatroka anti-LGBT. Natomboka ny raharaha heloka bevava hanenjehana azy ankehitriny taorian'ny fitoriana napetrak'i Timur Bulatov, mpikatroka fanta-daza amin'ny fanoherana ny LGBT. Nandinika ny satany toy ny gadra politika koa izy:
Mahatsapa aho fa maro be ireo vehivavy gadra politika tsy hita maso ankehitriny: reny, vady – vehivavy mitondra enta-mavesatra tsy mampino noho ny fizotry ny lalàna ara-politika. Tsy miresaka na manoratra momba azy ireo ny olona, ​​na raha miteny izy ireo, dia amin'ny resaka “maman'ny anona, vadin'olona”. Maherifo ny gadra politika, saingy mpiasa tsy hita maso ny vehivavy .
Ny 6 mey ho avy izao ny fotoam-pitsarana manaraka momba ny raharaha Yulia Tsvetkova.